Nyi Mu Yar: လက်လှမ်းမှီ သမျှ ကျန်းမာရေး အာမခံ (၂)
at Thursday, January 08, 2009 Labels: MM , Singapore Posted by nyimuyar
ကျေးဇူးဗျာ..။ ခုတစ်လော လိုက်ရှာနေတာ ။ ခုမှ သေချာနားလည်တယ်။ ဆက်ရေးပါဦး...။
အချိန်ရရင် ဆက်ရေးပါအုံး . ဒီပို ့စ်ဖတ်ပြီး ကိုယ် ဝယ်ထားတာနဲ ့ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ကိုက်မကိုက် ပြန်စစ်ကြည့်ရအုံးမယ် . ခု ဖတ်ပြီးသလောက်တော့ လိုနေသေးတယ်လို ့ခံစားရတယ် .
ဒီ ပို ့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် .
3 October 2010 at 06:55
ကို (မ) ညီမူရာရေ..ကျနော်လဲ...ကျန်းမာရေး
အာမခံအကြောင်း သိချင်လို. လို်က်ရှာဖတ်နေတာပါ..
နိုင်ငံခြားမှာ နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး....ဒါပေမယ့်
ကျနော်တို. မြန်မာ နိုင်ငံမှာလဲ တစ်ချိန်ကျရင် ဒီလို ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေါ်လာကောင်းရဲ့လို. မျှော်လင့် မိလို.ပါ....ဖတ်ပါရစေ...ကိုးကားပါရစေဗျာ...
3 October 2010 at 13:34
ကျွန်တော်လည်း ဘလော့လာ စာဖတ်သူတွေ အကျိုးရှိဖို့ဗဟုသုတ ရဖို့ မျှဝေထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုးကားနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် နားလည်သလို ရေးထားတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက် တစုံတရာ ရှိနိုင်ကြောင်း လိုအပ်ပါက မူရင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာ ဝက်ဆိုဒ်တွေကိုပါ ကိုးကားပါခင်ဗျာ